Santiago Solari oo macsalaameeyay ciyaartoyda kooxda Real Madrid – Gool FM
(Real Madrid) 11 March 2019. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sheegay in tababaraha kooxda Real Madrid ee Santiago Solari uu macsalaameeyay ciyaartoyda, shaqaalaha farsamada iyo kuwa caafimaadka ee kooxda, maadaama uu isku diyaarinayo in saacadaha yar ee soo aadan kadib uu ka dhaqaaqi doono garoonka Santiago Bernabéu.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sidoo kale sheegay in Real Madrid ay go’aan kama dambeys ah ku gaartay inay shaqada ka ceyriso Sanitajo Solari, kadib markii uu kooxda ku hogaamiyay natiijooyinka aan fiicneyn xiliyadii lasoo dhaafay.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in maamulka kooxda ay ogaadeen in xaalada haatan ay ku sugan tahay kooxda aysan ku sii jiri Karin, isla markaana ay haboon tahay in Santiago Solari la badalo.
Sida wararka lagu helayo macalinka reer Argantia ee Santiago Solari ayaa ka war qaba wax walba ee dhinacyadiisa ku hareereysan, wuxuuna galabnimadan macsalaameeyay ciyaartoyda kooxda.
Warar soo baxayay ayaa sheegaya in Real Madrid ay heshiis la gaartay Zinedine Zidane si uu dib ugu soo laabto tababarka kooxda, isla markaana uu u noqdo badalka Sanitajo Solari.
RASMI: Real Madrid oo ku dhawaaqday inay dib u soo ceshatay Zidane, kadib markii ay shaqada ka ceyrisay Solari